२०७३ मा कस्तो रह्यो सेयर... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
२०७३ मा कस्तो रह्यो सेयर बजार ?
२०७३ सालको सेयर बजारले विभिन्न नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भयो। नेप्सेले साउन १२ गते इतिहासमै सबैभन्दा धेरै अंक १८८१ कायम गर्यो।
त्यस्तै एकै दिन पौने ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भई रकमका आधारमा पनि बजारले नयाँ रेकर्ड बनायो। एक वर्षको अवधिमा नेप्से गत फागुन १ गते सबैभन्दा न्यून अंक १२ सय ५२ अंकमा झर्यो र त्यसपछिका दिनमा पुनः उकालो लागिरहेको छ।
बजारको उतारचढावले लगानीकर्तालाई धेरै कुरा पनि सिकायो। फागुन १ गते १२ सय ५२ अंकमा नेप्से पुग्दा आत्तिएर सेयर बेचेकाले र १८ सय ८१ अंकको उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला मात्तिएर सेयर किनेकालाई विशेष पाठ यो वर्षले सिकायो।
नेप्से १४ सय ५ अंकमा रहँदा २०७३ साल आरम्भ भएको थियो। १६ सय ९७ अंकमा कायम रहँदै नेप्सेले २०७३ साललाई विदाई गरेको छ।
सेयर बजार विकासका लागि पनि यो साल निकै महत्वपूर्ण रह्यो। यसै सालबाट लगानीकर्ताले मार्केट डेप्थ हेर्ने अवसर पाए। जसले गर्दा सेयरको माग र आपूर्तिलाई मध्यनजर गर्दै आदेश दिन लगानीकर्तालाई सजिलो भएको छ।
सम्पूर्ण सेयरलाई डिम्याट प्रणालीमा लैजान यो साल महत्वपूर्ण रह्यो। डिम्याटमा नगएका सेयरको कारोबार गर्न नमिल्नेगरी धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाले डिम्याट प्रणालीले चाँडै फड्को मार्न सफल भयो।
त्यस्तै प्राथमिक सेयर आवेदनका लागि आस्बा प्रणालीको सुरुआत भयो। जसले गर्दा प्राथमिक सेयर आवेदन दिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको छ। आफ्नो खाता भएको बैंकको शाखामा गई लगानीकर्ताले फोटो तथा नागरिकताको प्रतिलिपीविना नै आवेदन दिन सक्ने भएका छन्।
त्यस्तै उपत्यकाबाहिर थप शहरहरुमा आरडब्लुएस विस्तार भई सेयर कारोबार सुरु भएको छ। बनेपा, बिर्तामोड, नारायणघाट, नेपालगन्ज, बिराटनगर र बुटवल गरी ६ शहरबाट सेयर कारोबार गर्न सक्ने वातावरण २०७३ सालमा बन्यो। यसअघि ९ सदस्य दलालहरुले पोखरा, विराटनगर, धरान, नारायणघाट र धनगढीमा आरडब्लुएस मार्फत कारोबार गर्दै आएका थिए।
एक वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङका अनुसार डिम्याट प्रणालीमा आवद्ध लगानीकर्ताको संख्या ७ लाख ८६ हजार छ। यो दैनिकजसो बढिरहेको छ।
ब्रोकरको कमिसन साउन ५ गते ४० प्रतिशत घट्यो। सो दिन कमिसन ०.४ देखि ०. ६ प्रतिशतमा सीमित रहनेगरी निर्णय भयो। यो वर्ष पुँजी बजारको विकासका लागि पनि विगतका अन्य वर्षका तुलनामा धेरै प्रगति भएको देखिन्छ।
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पुँजी वृद्धि नियमका कारण यो सालमा बैैंक तथा फाइनान्सको सेयर पूर्ति बढ्न गएको छ। २०७४ सालमा पनि सेयर बजारको विकासका लागि लगानीकर्ताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। खरिदबिक्री आदेशलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने वा सेमिफ्लो अनलाइन प्रणालीमार्फत कारोबार सुरु हुने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ।
ताकि पूर्व वा सुदुर पश्चिमको जुनसुकै क्षेत्रमा बसेका लगानीकर्ताले मोबाइलबाटै सेयर खरिदबिक्री गर्न सकोस्। गैर आवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने वातावरण बन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ। यसअघि नै सम्वन्धित निकायहरुले यो कुरा उठाउँदै आएका हुन्।
त्यस्तै नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रुपमा अगाडि बढाउने कामले यो वर्ष प्रगति गर्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता छन्। आरडब्लुएस अन्य जिल्लाहरुमा विस्तार हुने र ब्रोकर कम्पनीको संख्या थपेर सेवालाई चुस्त पारिनुपर्ने आवाज लगानीकर्ताका संघहरुले उठाउँदै आएका छन्। २०७४ सालले पुँजी बजारको विकासमा थप टेवा पुगोस्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत ३१, २०७३, ०७:२७:१७